President U Thein Sein arrives Oslo | democracy for burma
President U Thein Sein arrives Oslo
tags: Burma, europe, Hotel Continental, Mr. KatjaNordgaard, Ms. Merete Brattested, Myanmar, Norway, OSLO, U Thein Sein, visit
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် နော်ဝေ ၊ဖင်လန် ၊သြစတြီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် အီတလီနိုင်ငံတို့သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ရန်အတွက် ဖေဖော်ဝါရီ(၂၅)ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်နေပြည်တော်မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာလေကြောင်းအထူးလေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့မှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ညပိုင်းတွင် ရောက်ရှိသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှMr. IsornPocmontri နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ဝင်း၊ စစ်သံမှူးဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းမောင်နှင့် သံရုံး၊စစ်သံရုံးတို့မှဝန်ထမ်းများက ကြိုဆိုကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ထိုင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာ ဖေဖော်ဝါရီ(၂၆)ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက်(၆)နာရီ(၁ဝ)မိနစ်တွင် နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ သို့ရောက်ရှိသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအား နော်ဝေနိုင်ငံသံတမန်ဌာန အကြီးအကဲMs. Merete Brattested၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. KatjaNordgaard၊ နော်ဝေနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည့် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မျိုးထွဋ်နှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများက အော်စလိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ခေတ္တတည်းခိုမည့် အော်စလိုမြို့ရှိ Hotel Continental သို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိသည်။
← NAY MYO ZIN PEACEMISSION KACHIN -ရက္စက္ပါေပကြယ္ VIDEOS
Indian Colonel Ajay Chaudhary arrested on drug smuggled →